Qaxootigga ka socda 11 dal oo la diidan yahay in Mareeykanka soo galaan | Somaliska
Qaxootigga ka socda 11 dal oo la diidan yahay in Mareeykanka soo galaan
Waxeey aheyd markii si ku meel gaari ah loo hakiyey in Mareykanku qaxooti soo qaato. Tanoo qeyb ka aheyd halgankii balaaran ee Trump-ka ku galay ollaha doorashadda ee uu ku sheegay dalkiisa ka mamnuucayo ineey soo galaan muslimiin uu arko ineey dhibaato ku yihiin Mareykanka.
Haatan qoraal uu soo saaray madaxweynaha dalkaasi ayaa lugu sheegay in dib loo bilaabay soo qaadashadii qaxootiga ee hakadka horey ugu yimid . Balse ay la socdaan sharuudo ah in baaritaano dheeri ah oo lugu sameeyn doono ka hor intaaneey iman Mareykanka.
” Dalalka muhiimad gaar ah la siin doono”
Qaxootiga iman doona dalkaasi ayaa waxaa lugu sameeynayaa baaritaano dhinaca baraha bulshadda ay qeyb ka tahay. Sidaasna waxaa tiri Jennifer Higgins, oo mas’uul ka ah waaxda qaabilsan macluumaadka qaxootiga ee Mareykanka ee laanta socdaalka.
“Amaanka dadka reer Mareykanka kan ugu horeeya ee muhiimad leh” ayey tiri. Dhinaca kale waxaa jira dadyow badan oo sugaya in la aqabalo codsigooda magangalyo, hase ahaatee dowlada dalkaasi ayaa weli il gaar ah ku eeggeeysa go’aanadda ay ka qaadaneeyso 11 dal oo lugu sheegay ineey yihiin “qatar aad u weyn”
Dalalka haatan tirro ahaan Trump iska dhex arkay ayaa waxaa ka mid ah lix wadan oo horey u shaabadayey kuwaas oo dhamaantood ah muslimiin, balse haatan lugu kordhiyey Koonfurta Suudaan, Masar, Ciraaq iyo Maali.
Mareykanka waxaa uu heeystaa shagaashan maalmood oo ay ugu kuura-geleeyso siddii xal xagga amaanka ah loogu heli lahaa qaxootiggii horey u qorsheysnaa soo qaadashadooda, kuwaas oo asalkoodu yihiin 11 -ka ee aan loo ogoleeyn in dadyowgoodu soo caggo dhigtaan dalkaasi.
Saas oo ay tahayna waxaa soo baxaya cabasho iyo dhaleeceyn loo soo jeedinayo maamulka Trump oo isagu arrimahan ku saado dheereysanayo siddii u waqtiga ugu sii dheereyn lahaa xayiraada socdaal ee dalalkaasi qaarkood ugu soo rogay. Boqolkiiba afartan iyo shan-na waxaa sanadkan loo ogolaaday dadyow ka socda 11-kaasi dal sida lugu sheegay hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi.